Qeexid: Wax ka beddel codka adoo adeegsanaya qoraalka | Martech Zone
Khamiista, Sebtember 19, 2019 Khamiista, Sebtember 19, 2019 Douglas Karr
Inta badan maahan inaan ku faraxsanaado tiknoolajiyadda… laakiin Qeex ayaa bilaabay adeeg istuudiyaha Podcast ah oo leh astaamo runtii xiiso leh. Tan ugu fiican, feker ahaanteyda, waa awoodda wax ka beddelka maqalka iyada oo aan lahayn tifaftiraha maqalka dhabta ah. Qeexitaanku wuxuu tarjumayaa boodhkaaga, oo leh karti-u-habeynta Podcast-kaaga adoo adeegsanaya qoraalka qoraalka!
Waxaan ahay podcaster aad uwanaagsan sanado badan, laakiin inta badan waan ka baqayaa inaan tafatirto qoraalkayga. Xaqiiqdii, waxaan u ogolaaday qaar ka mid ah wareysiyada cajiibka ah inay dhinac u dhacaan marka macluumaadka ku jira boodhadhka uu waqti xasaasi ahaa… laakiin ma aanan helin waqti aan ku sameeyo tafatir oo aan ku daabaco kahor waqtiga kama dambaysta ah.
Xaqiiqdii, haddii aan duubo Podcast daqiiqad ah 45, waxay qaadataa saacad ama xitaa laba saacadood in si buuxda loogu saxo duubista, lagu daro intros iyo outros, loo diro si loo qoro, oo loogu daabaco internetka. Waxaan ku dhawaanayaa inaan gariiro markii xoog iiga duubo. Hase yeeshe, waa dhexdhexaad wax ku ool ah waxaanan haystaa dhagaystayaal aad u tiro badan oo aan u baahanahay inaan sii wado inaan horay u sii wado.
Sharaxaadgu maahan kaliya tifaftire, ee waa barnaamij guud oo Podcast iyo Video Studio ah. Mid ka mid ah awooda kale ee xiisaha leh ayaa ah awooda si dhab ah loo galiyo ereyo aadan runta ku hadlin iyadoo la adeegsanayo Xad dhaaf muuqaalka!
Noocyada Sharaxaadda Ku dar
Warshadaha horseedka qoraalka - Wada-hawlgalayaasha sharraxaadda ee bixiyayaasha qoraalka ugu saxsan si loo hubiyo inaad had iyo jeer ka heshid qoraalka ugu fiican halkaas.
Tafatir maqal ama muuqaal adoo tafatirka qoraalka - Jiid oo hoos u dhig si aad ugu darto muusikada iyo saamaynta dhawaaqa. Fiidiyowga waxaa loo dhoofin karaa Final Cut Pro ama Premiere.
Isticmaal Tafatiraha Jadwalka loogu talagalay hagaajinta qummanaanta iyo mugga tafatirka.
Wadashaqeyn Toos ah - Waqtiga dhabta ah tafatirka badan iyo faallooyinka
Duubista Multitrack - Qoraalku wuxuu si firfircoon u soo saaraa hal qoraal oo isku dhafan
Xad dhaaf - Saxaan codkaaga cajalada adoo si fudud u qoraya. Waxaa awood ku leh Lyrebird AI
Isdhexgalka - Wadada Zapier, waxaad ku xiriirin kartaa Qoraal boqolaal ka mid ah barnaamijyada ugu caansan webka.
Haddii aad jeclaan lahayd inaad ka mid noqoto Shaxda Beta, waxaad codsan kartaa halkan:
Qeexitaanka Barnaamijka Beta
Koofiyad Koofiyad saaxiib la ixtiraamo Brad Shoemaker at Studios Zombie hal abuur leh raadinta!
Tags: adobe final cut proadobe premiereaisirdoonka macmalaudiotifaftiraha maqalkasharraxaadIstuudiyaha Podcast-ga ee hooseshimbirahaLyrebird AIFiidiyowyada Suuqgeyntatifaftiraha Podcastistuudiyaha Podcastpremiereqoraalka video
Ixtiraam: Madal Suuqgeyn Kordhinta Kanaalka